Bhaibheri Rinotaura Chokwadi Pazvese
Rinotaura Chokwadi Panyaya Dzesainzi
BHAIBHERI harisi bhuku resainzi, asi parinotaura zvesainzi, rinotaura chokwadi. Ngatimboonai nezvekunaya kunoita mvura uye kuumbwa kunoitwa mwana paanenge ari mudumbu.
Bhaibheri rinoti: “[Mwari] anokwevera madonhwe emvura kumusoro; anopfuura nepasefa semvura inonaya kuti ave mhute yake, zvokuti makore anodonhedza madonhwe.”—Jobho 36:27, 28.
Vhesi iyi inotaura zvinhu 3 zvinoitika kuti mvura izonaya. Chekutanga, kupisa kunoita zuva ‘kunokwevera madonhwe emvura kumusoro.’ Chechipiri, mvura inenge yakweverwa mudenga inobva yagadzira makore uye chechitatu, mvura inobva yatanga kunaya. Nanhasi vanoongorora mamiriro ekunze havanyatsonzwisisi zvese zvinoitika kuti mvura izonaya. Ndokusaka Bhaibheri rakazoti: “Ndiani anganzwisisa makore akaturikidzana?” (Jobho 36:29) Asi Musiki anonyatsoziva kuti zvinofamba sei uye akabva atoita kuti zvinyorwe muBhaibheri. Uye akaita izvi kare kare vesainzi vasati vatombotanga kuziva zvishoma zvavava kuziva.
KUUMBWA KWEMWANA MUDUMBU
Munyori weBhaibheri Mambo Dhavhidhi akati kuna Mwari: “Maziso enyu akaona muviri wangu uchangobva kuumbwa, uye nhengo dzawo dzose dzakanga dzakanyorwa mubhuku renyu.” (Pisarema 139:16) Dhavhidhi akataura mashoko aya achitaura nezvemaumbirwo emwana mudumbu. Aiti zvinoita sekuti pane bhuku remirayiridzo rinotaura zvinofanira kuitika pakuumbwa kwemwana. Chinoshamisa ndechekuti patova nemakore anenge 3 000 mashoko aya anyorwa!
Mumakore ekuma1800, imwe nyanzvi yesainzi yekuAustria yainzi Gregor Mendel ndipo payakazoziva mashandiro anoita magenes. Uye muna April 2003 nyanzvi dzesainzi ndipo padzakazopedza kuona marongerwo emagenes ose anodiwa pakuumba muviri wemunhu. Magenes ndiwo ane mirayiridzo yekuti nhengo imwe neimwe yemuviri wemunhu inogadzirwa sei. Mirayiridzo iyi yakanyatsorongeka sekurongwa kwakaitwa mashoko muduramazwi. Pachishandiswa mirayiridzo iyi, nhengo dzekamwana kari mudumbu dzakadai seuropi, mwoyo, mapapu, makumbo uye maoko dzinoumbika zvichienderana nekuti ndeipi iri kufanira kutanga uye kuti nguva yacho yakwana here. Ndokusaka nyanzvi dzesainzi dzakazoti magenes anoita sekuti “ibhuku rine mirayiridzo inoita kuti pave nemunhu.” Chii chakaita kuti Dhavhidhi anyore zvinhu zvakarurama kudaro? Akataura achizvininipisa achiti: ‘Mweya waJehovha ndiwo wakataura uchindishandisa, shoko rake raiva parurimi rwangu.’ *—2 Samueri 23:2.
ZVAKAOMA kuziva kuti maguta api kana kuti ihurumende dzipi dzichaparara, kana kuti dzichazova nesimba. Uyezve, zvakaoma kuziva kuti zvichaitika sei uye riini. Asi Bhaibheri rakagara rataura kuparadzwa kwaizoitwa mamwe maguta uye dzimwe hurumende dzaiva nesimba uye rakataurawo kuti dzaizoparadzwa sei. Imbonzwa mienzaniso miviri.
KUPARADZWA KWAIZOITWA BHABHIRONI
Kwemazana emakore, Bhabhironi ndiro raiva guta guru reumambo hwaiva nesimba panyika dzaiva kumadokero muAsia. Pane imwe nguva, raimbova guru kupfuura mamwe maguta ese pasi rese. Asi pachine makore anenge 200 risati raparadzwa, Mwari akafemera Isaya kuti aprofite kuti Koreshi ndiye aizoriparadza uye kuti raizova dongo zvachose. (Isaya 13:17-20; 44:27, 28; 45:1, 2) Ndizvo here zvakazoitika?
Koreshi akakunda Bhabhironi muna October 539 B.C.E., uye izvi zvakaitika muusiku humwe chete. Nekufamba kwenguva, migero yaiunza mvura muminda yaiva pedyo yakabva yaparara nekuti pakanga pasisina aiigadzirisa. Pakazosvika 200 C.E., zvinonzi hapana akanga achiri kugara muBhabhironi. Iye zvino ‘rava dongo’ sezvakanga zvataurwa neBhaibheri.—Jeremiya 50:13.
Isaya akaziva sei kuti izvi ndizvo zvaizoitika? Bhaibheri rinoti chaiva “chirevo pamusoro peBhabhironi chakaonekwa naIsaya mwanakomana waAmozi pane zvaakaratidzwa.”—Isaya 13:1.
NINIVHI RICHAVA “NZVIMBO ISINA MVURA YAKAITA SERENJE”
Ninivhi ndiro raiva guta guru reAsiriya, uye rainzi raiva rakavakwa neunyanzvi. Guta iri raiva nemigwagwa yakakura, mapaki, temberi, nedzimba dzakakura uye dzakanaka chaizvo. Asi muprofita Zefaniya akataura kuti guta iri raizova “dongo, nzvimbo isina mvura yakaita serenje.”—Zefaniya 2:13-15.
Mumakore ekuma600 B.C.E., vaBhabhironi nevaMedhiya vakabatana vachibva vaparadza Ninivhi. Rimwe bhuku rinoti, ‘kwemakore 2 500, guta iri rakanga risingachazivikanwi paraiva.’ Pakatomboita nguva vanhu vasina chokwadi kana guta reNinivhi raimbovako! Nechepakati pemakore ekuma1800, vanochera matongo vakawana zvinhu zvairatidza paiva neguta reNinivhi. Zvakawanda zvacho zviri kuora uye vamwe vari kungotora zvavanoda, zvekuti sangano reGlobal Heritage Fund rakati: “Zvishoma zvasara zvinoratidza kuti guta reNinivhi raivako zvinogona kupedzisira zvatoparara.”
Zefaniya akaziva sei kuti izvi ndizvo zvaizoitika? Anoti ‘ishoko raJehovha rakauya kwaari.’—Zefaniya 1:1.
Bhaibheri Rinopindura Mibvunzo Inokosha Muupenyu
BHAIBHERI rinopindura zvinogutsa mibvunzo inokosha muupenyu. Mimwe yacho ndeiyi:
NEI PANYIKA PAZERE ZVINHU ZVAKAIPA UYE VANHU VACHITAMBURA?
Bhaibheri rinonyatsotaura zvakajeka kuti sei panyika pazere zvinhu zvakaipa uye vanhu vachitambura. Rinoti:
“Munhu akatonga mumwe munhu achimukuvadza.”—Muparidzi 8:9.
Kutadza kutonga uye uori zviri kuita kuti vanhu vatambure zvakanyanya.
“Vose vanowirwa nenguva nezviitiko zvisingafanoonekwi.”—Muparidzi 9:11.
Munhu wese anogona kungoerekana aita tsaona, arwara zvakaipisisa, kana kuti awirwa nenjodzi.
Chivi nerufu zvakanga zvisipo pakatanga kusikwa Adhamu naEvha. Chivi ‘chakazopinda munyika’ Adhamu naEvha pavakarega kuteerera Musiki wavo.
Bhaibheri haringogumiri pakutsanangura kuti nei vanhu vachitambura. Rinotivimbisa kuti Mwari achabvisa zvese zvakaipa uye “achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve.”—Zvakazarurwa 21:3, 4.
Bhaibheri rinoti kana munhu afa, hapana kana chimwe chaanenge achiri kuziva kana kukwanisa kuita. Muparidzi 9:5 inoti, “Vapenyu vanoziva kuti vachazofa; asi vakafa havana kana chavanoziva.” Munhu paanofa, “pfungwa dzake dzinoparara.” (Pisarema 146:4) Saka anenge asingachakwanisi kunzwa, kufunga, kubata kana kuita chimwe chinhu.
Bhaibheri rinoratidza kuti kana munhu afa, anenge afanana nemunhu akabatwa nehope. Asi rinotivimbisa kuti vanhu vakafa vachamutswa.—Hosiya 13:14; Johani 11:11-14.
NEI MWARI AKATISIKA?
Bhaibheri rinoti Jehovha Mwari akasika murume nemukadzi. (Genesisi 1:27) Murume iyeye wekutanga ainzi Adhamu, uye ndosaka ainzi “mwanakomana waMwari.” (Ruka 3:38) Munhu akasikwa kuti ave neushamwari naBaba vake vekudenga uye kuti ararame nekusingaperi panyika achifara. Ndokusaka vanhu vese vachiberekwa vaine chido chekuziva Mwari. Bhaibheri rinoti: ‘Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvemweya, nokuti umambo hwokumatenga ndohwavo.’—Mateu 5:3.
Bhaibheri rinotizve: “Vanofara vaya vanonzwa shoko raMwari vachirichengeta.” (Ruka 11:28) Bhaibheri haringogumiri pakutidzidzisa nezvaMwari asiwo rinotibatsira kuti tifare muupenyu uye kuti tive netariro yeramangwana.
Munyori weBhaibheri Anoda Kuti Umuzive
MAMIRIYONI evanhu pasi rese akaona umboo hunoratidza kuti Bhaibheri ibhuku rinobva kuna Mwari uye kuti ndiro raanoshandisa kuti vanhu vamuzive. Bhaibheri rinoratidza kuti Mwari anoda kuti umuzive uye uve shamwari yake. Rinoti, “Swederai pedyo naMwari, uye iye achaswedera pedyo nemi.—Jakobho 4:8.
Kuverenga Bhaibheri kunoita kuti uzive zvimwe zvinhu zvinofadza. Zvii izvozvo? Paunenge uchiverenga rimwe bhuku, unotanga kuona pfungwa dzemunyori waro. Ndizvo zvakaitawo Bhaibheri. Paunoriverenga, unotanga kuona pfungwa dzeMusiki wako uye zvaanofarira nezvaasingafariri. Uyezve Bhaibheri rinotiudza:
Zita raMwari uye unhu hwake hwakanaka.
Chinangwa chaakasikira vanhu.
Zvaungaita kuti uve neushamwari naye.
Unoda kudzidza zvimwe here? Zvapupu zvaJehovha zvichafara kukubatsira. Vanogona kukurukura newe zviri muBhaibheri usingabhadhari. Izvi zvichakubatsira kuti uwedzere kuswedera pedyo neMunyori weBhaibheri, Jehovha Mwari.
Nyaya iyi yatsanangura zvimwe zvinhu zvinoratidza kuti zvechokwadi Bhaibheri ibhuku rinobva kuna Mwari. Kana uchida kunzwa zvimwe, verenga chitsauko 2 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha uye riripowo pawww.jw.org
Unogona kuonawo vhidhiyo inonzi Ndiani Akanyora Bhaibheri? iri pawww.jw.org
Tarisa pakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > MAVHIDHIYO
^ ndima 10 Bhaibheri rinotaura kuti zita raMwari ndiJehovha.—Pisarema 83:18.
Uprofita hwese hwakafemerwa naMwari hunongotaura zvichaitika mune remangwana here? Kwete nguva dzese.